XOG: M/weynaha Puntland muxuu uga baaqsaday ka qeybgalka shirka Beesha Caalamka iyo Madaxda Soomaalida ee Muqdisho?
October 1, 2019 NEWS 7
MUQDISHO(P-TIMES) – Kulanka gaarka ah ee Beesha Caalamka iyo Soomaaliya ayaa maanta ka furmaya magaalada Muqdisho, iyadoo ay ka qeybgalayaan in ka badan 40 dal oo taageero siiya Soomaaliya, sidaas oo kalena ay ku jiraan wakiilada caalamiga ah ee fadhigeedo yahay magaalada Muqdisho.
Puntland ayaa saluugtay ka qeybgalka kulankan, ka dib markii madasha la diiday in uu yimaado Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo aysan aqoonsaneyn xukumadda Faderalka.
War hoose oo aan ka helnay Madaxtooyada Garoowe ayaa cadeynaya in Madaxweynaha Puntland si cad u diiday ka qeybgalka shirkan, haddii aan la casumin Jubbaland, gaar ahaana Axmed Madoobe, wixii intaasi kadambeeyana aysan raali ka aheyn hab dhaqanka dawladda Faderaalka.
HALKAAN KA DAAWO XOGAHA SHIRKAN
Sidaas oo kale Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in ay Puntland ka carootay hanaanka hadaljeedinta oo ay sheegtay in laga hormariyey dhinacyo badan, mawduuca lagu qoray in uu ka hadlo Siciid Deni uu yahay mid aysan raali ka aheyn.
PuntlandTimes waxay heshay Jadwalka rasmiga ahaa ee kulanka, iyadoo uu Madaxweynaha Puntland Siciid Deni hadaljeedintiisu ahayd “Security challenges and lessons” isagoo hadli lahaa marka uu khudbadda dhameeyo wasiirka koowaad ee Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya.
Ka qeybgal la`aanta kulanka ee Puntland ayay warar kala duwan ka soo baxayaan, waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in ay tagi doonaan wasiiro katirsan Xukuumadda Puntland, balse ilaa hadda lama xaqiijin warkan.
puntlandtimes.ca, WAAN kugu qaldamay oo ma ogayn inay QABYAALADI idin cawartay WAASE haddaan mar dame ku soo booqdo. WBT
Ahmed Somali, waxaan ku sheegnay war walaal, wax aragtideedana kuma jirto gabi ahaanba.
Wariyaha puntlandtimes,waxuu kamadax banan yahay Siyasada puntland umana shaqeyo,waxase muqanaysa in aad cudur kaqabto wariyahas.
President Deni did the right thing to stay away from Mogadishu. He should not send anyone else either.
Farmajo and Khayr laawe are tribalists who lost the respect of the Somali people
Puntlandtimes sidii Gaas uga degay xukunka puntland nabad iyo nolol ayay ku biirtay qabyaaladu waa cajiib. Page kan waxaa xoqara dad qabiilku lafaha ka galay.
PUNTLANDTIMEs koox iyo Qabiil gaar ah maleh walaale.
Yuusuf Ali Mohamed says:
Magaca Deni maaha ee waa dulli